Ujyaalo Sandesh | » नेकपा महासचिव विष्णु पौडेललाई किन मुद्दा चलेन ? नेकपा महासचिव विष्णु पौडेललाई किन मुद्दा चलेन ? – Ujyaalo Sandesh
विजय गच्छादारसहित पूर्व मन्त्री, सचिव लगायत अनेक धनाड्य व्यक्तिहरुमाथि मुद्दा दायर भएपनि नेकपाका महासचिव विष्णु पोडेलमाथि किन मुद्दा भएन भन्ने जिज्ञासा यतिबेला सर्वत्र छ । सरकारी जग्गा दुई तह बिक्री भइसकेपछि मात्रै महासचिव पौडेलले छोराको नाममा जग्गा किनेको देखिन्छ ।
सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने काम ‘भ्रष्टाचारजन्य कसुर’ मानिन्छ। ललिता निवासको ३ सय ९९ रोपनी जग्गा विभिन्न व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने क्रममा नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल पनि विवादमा तानिएका थिए।
तर, अरुलाई भने मुद्दा चलेको छ । अधिवक्ता अपूर्व खतिवडा नेपालको कानुन सबैका हकमा समान रुपमा लागू नहुने हो भनी प्रश्न गर्छन्। छ,’ खतिवडाले फेसबुकमा प्रश्न गरेका छन्, ‘के नेपालमा तिलककुमारी र विष्णु पौडेलका लागि फरक कानुन छन? के दुवैजना यो राष्ट्रका समान नागरिक हुन्?’